तालिबानको अन्तरिम सरकारमा फुट, सह–संस्थापक मुल्ला गनी बरादरले काबुल छोडेको दाबी (बरादर कहाँ छन् ?) « Nepal Page
तालिबानको अन्तरिम सरकारमा फुट, सह–संस्थापक मुल्ला गनी बरादरले काबुल छोडेको दाबी (बरादर कहाँ छन् ?)
काठमाडौं, ३० भदौ । तालिबानको अन्तरिम सरकारमा फुट निम्तिएको छ । तालिबानका वरिष्ठ अधिकारीले सो कुरा बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति भवनमा तालिबानका सह–संस्थापक मुल्ला गनी बरादरको समूह र मन्त्रीमण्डलका सदस्यबीच विवाद भएको उनले जानकारी दिए ।
तालिबानको एक स्रोतले बीबीसीपश्तोसँग बरादर र खलिल उर(रहमानबीच आपसी विवाद भएको जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार विवादपछि दुई नेताका समर्थक आपसमा भिडे । खलिल उर( रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्कका नेता र तालिबानको सरकारमा शरणार्थी मन्त्री हुन् । मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई तालिबानले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
कतारस्थित तालिबानका एक वरिष्ठ सदस्य र एक व्यक्ति ९जो यो विवादमा समावेश थिए०, ले अघिल्लो हप्ता विवाद भएको पुष्टि गरेका छन् । स्रोतका अनुसार विवाद यसकारण सुरु भयो किनभने बरादर, जसलाई अन्तरिम सरकारमा उप–प्रधानमन्त्री बनाइएको छ, उनी सरकारको संरचनासँग खुसी छैनन् । अफगानिस्तानमा जीतको श्रेयको विषयमा पनि तालिबानका नेता आपसमा उल्झिरहेका छन् ।
बरादर तालिबानका पहिलो नेता हुन् जसले सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष फोनवार्ता गरेका थिए । यसअघि उनले तालिबानको तर्फबाट दोहा सम्झौतामा अमेरिकी सैनिकको फिर्तीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्कोतर्फ शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्क हो जुन हालका वर्षमा अफगानिस्तानमा पश्चिमी बलमा सबैभन्दा हिंस्रक हमलामा संलग्न रह्यो ।
अमेरिकाले यसलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ । यसका नेता सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानको नयाँ सरकारमा गृहमन्त्री हुन् । अफवाहको बजार अघिल्लो हप्ता त्यतिबेला तात्तियो जब तालिबानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिने बरादर सार्वजनिक रुपमा देखिन छोडे । सोसल मिडियामा उनको मृत्युको खबर आउन थाले ।
बीबीसीसँग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बरादर काबुल पुगेर क्यामराको अगाडि आउन सक्छन् र कुनै पनि प्रकारको विवादको कुरालाई खारेज गर्न सक्छन् । तालिबानका सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अअुन्दजादाको विषयमा पनि विभिन्न प्रकारहको अड्कलबाजी छन् । उनी सार्वजनिक रुपमा कहिल्यै देखिएका नै छैनन् । उनीसँग तालिबानको राजनीतिक, सैन्य र धार्मिक मामिलाको जिम्मेवारी छ ।
यसैबीच अफगानिस्तानका कार्यकारी विदेश मन्त्रीले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय दानकर्तासँग पुनः मद्दतको अपिल गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदारले आफ्नो मद्दतको विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रले अफगानिस्तानमा स्थिति भयानक रुपमा बिग्रने चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि एक अर्ब डलरभन्दा बढीको मद्दतका लागि पहल सुरु गरिएको छ । एजेन्सी